ली दे फरेस्ट - Safal Stories
Home Motivational Biographies Science And Technology ली दे फरेस्ट
ली दे फरेस्ट
” अरुले तिमीलाई के बनाउन चाहन्छन् भन्नु भन्दा तिमी आफू जे बन्न चाहन्छौ त्यसको लागि कोसिस गर “
ली दे फरेस्ट रेडियोका पिता भनेर चिनिन्छन् । रेडियो , टि.भी र फिल्मको विकास हुनुको श्रेय उनलाई नै जान्छ । १८० प्याटेन्ट उनका नाममा रहेका छन् । प्रविधि विकासमा ठूलो योगदान दिएका फरेस्टको जन्म सन् १८७३, अगस्ट २६ मा भएको थियो ।
ली दे फरेस्ट हेनरी स्विफ्ट र अन्ना रोबिन्सका छोराको रुपमा जन्मिएका हुन् । उनका बुवा चर्च मिनिस्टर तथा तल्लादेगा कलेजको अध्यक्ष थिए । उनि सानैदेखि मेसिनरी सामंप्रती आकर्षित थिए । किशोरावस्थामा नपुग्दै फरेस्टले मेसिनरीको डिजाइन गरेका थिए । उनका बुवाले फरेस्टले आफ्नो बाटो पछ्याउन् भन्ने चाहन्थे तर फरेस्ट पनि विज्ञान तिर आकर्षित थिए विज्ञान पढ्न लागे । उनले सन् १८९६ मा विज्ञानमा स्नातक गरे र सन् १८९९ मा फिजिक्समा पी.एच.डी हासिल गरे ।
ली दे फरेस्टको करियरको सुरुवात सिकागोको वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीमा जागिरबाट सुरु भयो । त्यहाँ काम गर्दा खालि समयमा उनले आफ्नो प्रयोगात्मक काम गर्थे जसबाट हर्त्जियन वेभ्सको ईलेक्ट्रोलाइटिक डिटेक्टरको विकास गरे । सन् १९०२ मा उनले आफ्नै बिजनेस खोले, द दे फरेस्ट वायरलेस टेलिग्राफ कम्पनी । त्यसमा उनले आफूले आविष्कार गरेका रेडियो सम्बन्धि सामानहरु बेच्न थाले । उनि आफ्नो बिजनेसबाट नाफा हुनेमा विश्वस्त थिए तर बिजनेस पार्टनरहरुले उनलाई ठगे र उनको बिजनेस पूर्ण रुपमा ऋणमा डुब्यो ।
सन् १९०६ मा फरेस्टले इलेक्ट्रोनिक एम्प्लिफ़ाइङ्ग भ्याकुम युट्युबको आविष्कार गरे। त्यसपछि उनले टु-इलेक्ट्रोड डिभाइस, डीओड़ भ्याकुम ट्युब डिटेक्टरको आविष्कार गरे भने केहि समय पछि फेरी थ्री-इलेक्रोड डिभाइसको आविष्कार गरे जसको १९०८ मा प्याटेन्ट पाए । पहिलो बिजनेसको असफलता पछि फरेस्टले फेरी दोस्रो पटक बिजनेसको सुरुवात गरे, दे फरेस्ट रेडियो टेलिफोन कम्पनि । तर फेरी पनि पार्टनरहरुले ठगेकै कारण उनको बिजेस डुब्यो। त्यसपछि उनलाई ठगीको आरोप समेत लाग्यो तर सन् १९१२ मा उनि दोषमुक्त भए।
असफलताबाट हार नखाने फरेस्टले सन् १९१६ मा न्युयोर्कमा पहिलोपटक परिक्षण रेडियोबाट आफ्नै उत्पादनको विज्ञापन प्रशारण गरेका थिए । त्यसपछि उनले राष्ट्रपतीय चुनावको पनि प्रशारण गरे । सन् १९१९ मा उनले आवाज सहितको फिल्म टेक्निकको विकास गरे । त्यसपछि उनले फ़ोनोफ़िल्म्को विकास गरे । दिमागका धनी यी आविष्कारक धनका धनी भने कहिल्यै हुन सकेनन् ।
रेडियो, टि.भी र फिल्मको विकास लि दे फरेस्टकै आविष्कारबाट सम्भव भएको हो । संसारभर उनलाई रेडियोका पिता भनेर चिनिन्छ। सन् १९२२ मा फरेस्टलाई आइआरइ मेडल बाट सम्मानित गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९४६ मा उनि एडिसन मेडलबाट समेत सम्मानित भए । आफ्नो जीवनकालमा चार बिहे गरेर अन्तिम समयसम्म चौथो पटक बिहे गरेकी श्रीमती संग रहेका उनको ८७ वर्षको उमेरमा सन् १९६१ मा निधन भएको थियो।
तपाईंलाई सल्लाह सुझाव दिने मानिसहरु प्रशस्त भेटिन्छन्। तपाईंलाई केहि बनेको देख्न चाहने परिवार वा शुभचिन्तक हुन्छन् । उनीहरुले तपाईंलाई सफल देख्नको लागि सुझाव दिईरहेका हुन्छन् । तर तपाईं आत्मसन्तुष्टि सहित सफल केमा बन्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको लागि अरुले देखेको सपनामा वा तपाईं आफूले देखेको सपनामा ? पहिले यसको उत्तर खोज्नुहोस् अनि आफ्नो बाटो निर्धारण गर्नुहोस् । सफलता भन्नु आर्थिक सम्पन्नता मात्र होईन, तपाईंको आत्मसन्तुष्टि पनि हो ।
Previousपीडितहरुका सारथी ‘धुर्मुस’
Nextरोडपतिदेखी करोडपति बनेका गार्डनर